भिटोफ नेपालको महासचिवमा शिव पौडेलको उम्मेदवारी, सहमतिमा नभए चुनावमै जान तयार | दर्पण दैनिक
उपचारमा बढी शुल्क लिने निजी अस्पताललाई कारवाही !
राष्ट्रिय सभा सदस्य उपनिर्वाचनको लागि दल दर्ता गर्न आह्वान
राजनीति फोहोर भयो भन्दै किनारमा बसेर औँला ठड्याएर मात्र युवाको दायित्व पूरा होला ?
यार्सागुम्बा संकलन गर्न पाटन पुगेका एक जनाको मृत्यु, चार जना पक्राउ
यसपालिको मनसुनमा बढी वर्षा हुने (कुन कुन स्थानमा बढी ?)
भारतमा १६ करोडले लगाए कोरोनाविरुद्धको खोप, यस्ताे स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांक
प्रधानमन्त्री ओलीकाे प्रस्ताव देउवाले गरे अस्वीकार
पूर्वरानी कोमलको स्वास्थ्य सुधारोन्मुख
देशभर ५८ जनाको मृत्यु, ८६५९ जंक्रमित थपिए
‘हामी त डुब्छाैँ नै, तिमीलाई पनि लिएरै डुब्छाैँ’
भिटोफ नेपालको महासचिवमा शिव पौडेलको उम्मेदवारी, सहमतिमा नभए चुनावमै जान तयार
प्रकाशित मिति: २०७७ चैत्र ११ गते ०८:४४
काठमाडौं । पर्यटन ब्यबसायीहरुको गाउँ पर्यटन प्रबर्द्धन मञ्च (भिटोफ नेपाल) को २४औं निर्वाचन यहि चैत्र २० गते राजधानीको ठमेलमा हुने भएको छ । पर्यटन ब्यवसायिहरुको हक हित तथा ग्रामिण पर्यटन बिकासकालागि निरन्तर काम गर्दै आएको संस्था हो भिटोफ नेपाल । चुनाब नजिकिदै गर्दा पर्यटन हब ठमेलमा यतिबेला चुनाबि चहलपहल बढेको छ। यस सगै ब्यवसायिहरुले विभिन्न पदमा उम्मेदवारी दिन थालेका छन ।
यसै बिच पर्यटन ब्यवसायि पर्यटन ब्यवसायिहरुको छाता संस्था (निट) को तर्फबाट युवा पर्यटन ब्यवसायि शिव पैडेलले महासचिव पदका लागि उम्मेदवारी दिएका छन । पौडेलले तनहुँ पुगेर तनहुँ पर्यटन प्रवर्द्धन समाजले आयोजना गरेको २ दिने अवलोकन तथा पर्यटन प्रवर्द्धन भ्रमण कार्यक्रमका बिच उम्मेदवारी घोषणा गरेका हुन।
नेपाल लायन टुर एन्ड ट्रेकका संचालक समेत रहेका पौडेल महासचिव पदका प्रमुख दावेदार मानिन्छन् । पर्यटन क्षेत्रमा १२ बर्ष बिताइसकेका पौडेलले आफु निर्वाचित भएपछि अहिले सम्म संघमा भएका बेथितिलाइ निराकरण गर्दै ग्रामीण पर्यटन बिकासका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने बताए । पौडेलले सहमति र सहकार्यबाटै अघाडि बढ्ने आफ्नो चाहाना भएको र यदि सहमति हुन नसके मैदानबाटै आउन पनि तयार भएको बताए।
सुनकाे मूल्य घट्याे
२०७८ बैशाख २२ गते ११:५२
काठमाडाैं । नेपालमा आज सुनको मूल्य घटेको छ । आज प्रतितोला ३ सय रुपैयाँ घटेको हो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार छापावाल सुन प्रतितोला ९० हजार ३ सय रूपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । हिजो सुन प्रतितोला ९० हजार ६०० रूपैयाँ कायम थियो । आज तेजावी सुन प्रतितोला ८९ हजार ८०० रूपैयाँ कायम छ । चाँदी प्रतितोला १ हजार ३२० रूपैयाँ तोकिएको छ ।
मध्य भोटेकोशीको आईपिओ आजदेखि, कहाँ कहाँ दिने आवेदन ?
२०७८ बैशाख २१ गते ०९:२६
काठमाडाैं । मध्यभोटेकोशी जलविद्युत कम्पनीले स्थानीयका लागि आज (मंगलबार)बाट आईपीओ निष्कासन गर्दै छ । कम्पनीले स्थानीयलाइ ६० करोड बराबरको ६० लाख कित्ता शेयर निष्काशन गरेको हो। कम्पनीले सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका बासिन्दाको लागि कुल जारी पूँजी ६ अर्बको १० प्रतिशत अर्थात् ६० करोड बराबरको ६० लाख कित्ता निष्काशन गर्न लागेको हो। मध्यभोटेकोशीको शेयर निष्कासनका लागि धितोपत्र बोर्डबाट वैशाख ५ गते स्वीकृति पाएको थियो । कम्पनीले सेयर भर्नका लागि सिन्धुपाल्चोका ३६ स्थान तोकेको छ भने काठमाडौंमा पनि बिक्री केन्द्र राखेको छ ।
नेता नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाएर एमालेकै नेतृत्वमा बाम सरकारलाई निरन्तरता दिनुपर्छ : नेता रिजाल
एमालेको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारबाहीमा परेका प्रकाश ज्वालाले गरे यस्ताे अपील
लुम्बिनी प्रदेशमा भएको समग्र घटनाक्रम असंबैधानिक
खनाल–नेपाल समूहका २१ सांसदले राजीनामा दिने !
राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा उमेदवार बन्न पाउने भएपछि एमाले छोडेका पाण्डे कांग्रेस प्रवेश
‘बहुमत पुर्याउन भ्यागुत्ताको धार्नि जस्तै हो, भने त ओलीको रिस मात्रै गरेर के गर्नु’